पोखरेल ज्यू ! पुनःनिर्माण प्राधिकरण कांग्रेसको पार्टी कार्यालय हो ?
शनिबार, २१ असोज, २०७४
काठमाडौं, असोज २१ । नेकपा एमालेको नियुक्तिमा सुशील ज्ञवाली पुननिर्माण प्राधिकरण प्रमुख भएकै दिनदेखि गोविन्द पोखरेलको गुनासो लामो समय गुन्जियो । प्राधिकरणमा आफू उपयुक्त व्यक्ति भएकाले पुननिर्माणको काम आफूले प्रभावकारी ढंगले गर्नसक्ने दावि पोखरेलको थियो ।
पोखरेलले भने अनुसार केही महिनापछि प्राविधिकरणमा नियुक्ति पाए पनि । नियुक्ति पाएको केही साता बित्न नपाउँदै उनका कमजोरी देखिन थाले । ज्ञवालीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदैआएका पोखरेल आफैँले भने ज्ञवालीले जति पनि काम गर्न सकेनन् ।
भूकम्पबाट भत्किएका घर निर्माणको लागि ज्ञवालीको कार्यकालमा जसरी रकम बितरण गरिएको थियो त्यसको चर्को बिरोध गरेका थिए पोखरेलले । भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि रकम बितरणको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै पोखरेल आफूसँग प्रष्ट खाका भएको बताउँदैआएका थिए ।
तर पोखरेल आफैँले भने काफ्नो कार्यकालमा न ज्ञवालीको कार्यक्रम रोक्न सके न आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्न सके । अन्ततः पोखरेल एक असफल प्रमुखको रुपमा चिनिए ।
पोखरेल प्राविधिक त हुन् नै त्यसभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता हुन् । कांग्रेसको पछिल्लो अधिवेशन चुनावमा उम्मेदवार समेत बनेका उनी अन्ततः प्राधिकरणको महत्वपूर्ण र संवेदनशील जिम्मेवारी लत्याउँदै कांग्रेसको सांसद बन्न कसरत गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणको कामलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गरी राजनीतिमा सक्रिय बनेको भए उनलाई विश्वास गर्ने आधार पनि हुने थियो । उनी त राष्ट्रिय महत्वको जिम्मेवारीलाई बीचमै अलपत्र पारेर कांग्रेसको तर्फबाट सांसद बन्न गृहजिल्ला प्युठान पुगे ।
यतिसम्म कि, पोखरेलको गतिविधिका कारण निर्वाचन आयोगले समेत स्पष्टिकरण लिनुपर्ने अवस्था आयो । सांसद उम्मेदवारको सिफारिस पाएका पोखरेल भने पार्टीको लागि आफूले इमानदार भएरै काम गरेको जिकिर गरेका छन् ।
पोखरेलले यसो भनिरहँदा नियुक्ति हुनुअघि आफैले बोलेको कुरा सम्झनुपर्ने हो । सम्झनुपर्ने कुरा के पनि हो भने पुननिर्माण प्राधिकरण पोखरेलको पार्टी नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय होइन । जहाँ उनी इच्छाअनुसार छिर्न र बाहिर निस्किन पाउनेछन् ।
प्राधिकरण प्रमुख पोखरेल जतिबेला आफ्नो जिल्ला पुगेर कांग्रेसबाट आफू उम्मेदवार बन्ने भन्दै पार्टीलाई भोट मागे त्यतिबेला ख्याल गर्नुपथ्र्यो कि, भूकम्पबाट घरबार बिहिन हजारौँ नागरिकले पोखरेल प्राधिकरणमा नियुक्ति पाएसँगै केही आशा राखेका थिए ।
पोखरेलले भनेका छन्, ‘पार्टीले खटाएर नियुक्ति लिएको थिएँ । अहिले पनि आवस्यकता अनुसार पार्टीको कामको लागि खटिएको हुँ ।’ पोखरेलले भने झैँ प्राधिकरण कांग्रेस, एमाले वा माओवादी कुनै पार्टीले चाहे अनुसार चलाउन मिल्ने नियोग हो र ?
यदि त्यसो हो भने त, पोखरेल कांग्रेसी कार्यकर्ताको घर बनाउन मात्रै प्राधिकरणमा छिरेका थिए भन्न मिल्छ । उनलाई पार्टीको जिम्मेवारीबोध भएसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व र सरकारी कार्यभारको पनि ख्याल हुनुपर्छ ।
उनले प्राधिकरणमा कांग्रेसले भने झैँ कांग्रेसको नुनको सोझो गर्न गएको ठाने पनि त्यस्तो नभएर सरकारको नियुक्तिमा जनताको सेवा गर्न गएका पनि हुन् । तर पोखरेलले त्यस्तो सब लत्याएर ‘नैतिक हराम’ चरित्र देखाए । पोखरेलले सोच्नुपर्ने के हो भने, के भूकम्प पीडित जनताले तपाईँको भगौडा चरित्रलाई माफी दिएलान् ? प्राधिकरणमा भत्ता खाएर बस्ने, काम गर्न नसकेपछि पार्टीको झण्डा बोकी सांसद बन्न जाने दही चिउरे प्रबृत्ति सांसद नै बने पनि संसदभित्र हानिकारक हुनेछ ।